Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IHawaii inika ingxelo yokuqhambuka kweNtaba-mlilo eNtsha
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuqhuma kwentaba-mlilo yaseHawaii
Malunga no-3: 20 emva kwemini iHawaii Standard Time (HST) namhlanje, ngolwesiThathu, nge-29 kaSeptemba 2021, uqhushumbo luqale ngaphakathi eHalema'uma'u crater kwingqungquthela yaseKīlauea, ngaphakathi kweHawaii'iVolcanoes National Park.
Iifissure zivulekile ngaphakathi kwechibi elidala lalava kumngxuma osempuma kwaye zivelisa ukuhamba komdaka kumphezulu wechibi.
Omnye umoya uvulwe malunga ne-4: 43 ngokuhlwa namhlanje kudonga olusentshona lweHalema'uma'u crater.
I-Volcano Observatory yaseHawaii yaphakamisa inqanaba lokulumkisa ukusuka kwiorenji ukuya kobomvu, oko kuthetha ukuba ugqabhuko-dubulo ngoku luphantsi kwengcebiso yewotshi.
Izikrelemnqa zavuleka kwimpuma yesiqithi esikhulu ngaphakathi kwechibi ledike elalisebenza kulo Indawo yaseHalemaʻuma'u ukusukela nge-Disemba ka-2020 kude kube ngoMeyi ka-2021, kwaye bavelisa ukugeleza kwodaka kumphezulu wechibi elidala lalava.
Malunga ne-4: 43 emva kwemini i-HST, kwavulwa omnye umoya kwindonga yasentshona yeHalema'uma'u crater.
I-Volcano Observatory yaseHawaii yathumela ifoto yolava kwi-crater kungekudala emva kokuphakamisa inqanaba lokulumkisa i-volcano kwiwotshi evela kubacebisi.
Ngokwe-Volcano Observatory yaseHawaii, ngale mvakwemini izise ukwanda kokuguqa komhlaba kunye nomsebenzi weenyikima. Isilumkiso senqanaba saphakanyiswa ukusuka kwiorenji ukuya kobomvu (isilumkiso) malunga ne-4: 00 ngokuhlwa iinyikima ezili-17 zarekhodwa yi-US Geological Survey (i-USGS) kububanzi obungu-2.5-2.9 ngeyure zokugqibela ezingama-24.
Ngokuqhuma kuqulethwe ngokupheleleyo ngaphakathi eHalema'uma'u crater, okwangoku akukho zisongelo kwiindawo ezihlala abantu. Amagosa aya kubeka esweni lo msebenzi kunye neengozi ezinokubakho njengoko uqhushumbo luqhubeka.
IHawaii Shira kwabelwane ngayo kwi-twitter ngaphantsi kwesiqingatha seyure eyadlulayo: Unyana wam uthe uqaphele ukwanda kwesarfure yesalfure xa esiya kulanda [unyana] wakhe kwisikolo iVolcano Charter School ngale njikalanga.
Ixesha lokugqibela lokudubula kweKilauea kuxa kwaqala ngoDisemba ka-2020. Yaqhubeka ikhupha udaka lwentaba kude kwaba ngoMeyi 2021. Olo dubulo lwadala ichibi elitsha lengqungquthela kwindibano yale crater.
Ngexesha lokugqibela kokusebenza, iKilauea yavelisa ngaphezulu kwe-41 yezigidi zeekyubhiki mitha, okanye iilitha ezili-11 lezigidi, zelava ngeentsuku ezili-157 yayihlala iqhuma.
I-Lava yayiphumile kwakulaa ndawo inye kwi 2018 xa iKilauea yagqabhuka kwenye yeendawo eziphantsi. Olo gqabhuko-dubulo lwalulolona lukhulu lwakha lwabhalwa ukuza kuthi ga ngoku kwintaba-mlilo. Yatshabalalisa amakhaya amaninzi kwaye yafudusa amawaka abantu.